China Apple, ube, grape, igwe pọmigranet na mmepụta akara ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta ihe | JUMP
Apple, ube, greepu, pọmigranet nhazi igwe na mmepụta akara
Apple, ube, grape, pọmigranet nhazi igwe na mmepụta akara ngwugwu: karama, PITA karama plastic, zip-top nwere ike, aseptic soft ngwugwu, brik katọn, gable top katọn, 2L-220L aseptic akpa na drum, katọn ngwugwu, plastic akpa , Tin 70-4500g.
Apple, ube, greepu, igwe pọmigranet na mmepụta akara dị mma maka nhazi apụl, ube, mkpụrụ vaịn na pọmigranet. Ọ nwere ike na-emepụta doro anya ihe ọ juiceụ juiceụ, turbid ihe ọbidụ juiceụ, lekwasị ihe ọ juiceụ juiceụ, mkpụrụ ntụ ntụ, mkpụrụ osisi jam. Mmepụta akara tumadi mejupụtara Scraper mbuli, afụ Cleaner, ahịhịa Cleaner, preheater, precooking igwe, crusher, beater, juicer, belt juicer, kwụ ịghasa centrifuge, urukurubụba centrifuge, ultrafiltration ngwá, filtration ngwá, resin adsorption akụrụngwa, arụ ọrụ carbon filtration. akụrụngwa, ngwa ịchọ mma, enzymatic hydrolysis system, homogenizer, degasser, tuber-in-tube sterilization machine and aseptic filling machine. Mmepụta akara nwere elu imewe echiche na ogo dị elu nke akpaaka; akụrụngwa bụ isi nke igwe anaghị agba nchara, nke na-ezukọ n'ụzọ zuru oke maka usoro ịdị ọcha nke nhazi nri. Ngwá ọrụ nhazi apụl ahụ mepụtara ma mepụta n'ụzọ zuru ezu na-amịpụta echiche dị elu nke Europe na America. The ụlọ ọrụ nwere a usoro nke magburu onwe azụmahịa ụdịdị na keukwu ike si oru ngo imewe na mmepe, mmepụta na n'ichepụta, echichi na debugging na oru ọzụzụ na mgbe-sales ọrụ.
* Nhazi ikike site na 3 tọn / ụbọchị ruo 1500 tọn / ụbọchị nke mkpụrụ osisi ọhụrụ.
* Nwere ike ịhazi mkpụrụ osisi nwere njirimara yiri ya, dị ka mango, painiapulu, wdg.
* Nwere ike kpochara site multistage na-asụ afụ na ahịhịa nhicha
* Belt juicer nwere ike ime ka painia ihe ọ increaseụ juiceụ ihe ọ juiceụ juiceụ mmịpụta
* Nchapu, denudation na igwe pulping iji mezue nchịkọta ihe ọ juiceụ juiceụ
* Obere okpomọkụ agụụ ịta, iji hụ na ekpomeekpo na nri, na nke ukwuu ịzọpụta ume.
* Ọgwụ nwoke na nwanyị na aseptic na-ejuputa iji hụ na ngwaahịa a dị aseptik.
* Na akpaka CIP ihicha usoro.
* Ihe ihe eji eme ihe bu 304 igwe anaghị agba nchara, nke zuru oke choro nke ocha na nchekwa.
Apple, ube, grape, pọmigranet nhazi igwe na mmepụta akara e ji mara: (1) na usoro nke Apple ndinuak, na-atụle omume nke enzyme browning, m na-eji usoro spraying isoascorbic acid mgbe azọpịa iji gbochie enzyme browning nke polyphenol oxidase ikpughe na ikuku oxygen n'oge usoro ndinuak; (2) na usoro nke ịicingụ ihe ọ ,ụicingụ, na-eche na a ka nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke apụl akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Australia nke pectin siri ike imebi, mkpụrụ ndụ anụ ahụ siri ike ịkwụsị, ihe ọ andụ juiceụ ahụ siri ike ịpịa. Nzube a nakweere usoro nke decomposing pectin tupu ọ dị ụtọ, na-eji mmetụta nke Pectinase decompose pectin iji melite mkpụrụ osisi mkpụrụ; (3) iji meziwanye nkọwa nkọwa nke ihe ọ juiceụ juiceụ, njikọ nke enzymatic hydrolysis na teknụzụ ultrafiltration membrane nakweere.
Nke gara aga: Olive, piom, bayberry, piich, aprịkọt, pịlị nhazi igwe na usoro mmepụta
Osote: Akụrụngwa akụrụngwa na usoro mmepụta
Igwe onyinye na ngwa Spaghetti
Olive, piom, bayberry, piich, aprịkọt, piom pro ...
Igwe mmiri dị ọcha
French fries akụrụngwa
Soft swiiti igwe